Ampidino MoneyPlan ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (8.78 MB)
MoneyPlan dia mpitantana fitantanam-bola maimaimpoana ary mahomby izay mamela ny mpampiasa hanaraka ny fifanakalozana ara-bola sy ny tetibolany manokana miaraka aminny ezaka kely indrindra. Ny interface interface-friendly dia natao mba hahafahanao miditra aminireo endri-javatra fototra rehetra.
Azonao atao ny mampiasa MoneyPlan hijerena ny mombamomba ny fandoavam-bola sy ny faktiora miandry anao, ary koa ny hanaovana fifanakalozana mora foana. Mandritra izany fotoana izany dia afaka manaraka ny fandanjana isan-kerinandro sy isam-bolana na isan-taona ianao noho ny fizarana teti-bola ao aminilay programa.
Haben'ny rakitra: 8.78 MB